Manchester City oo Barcelona kala xaajooneysa saxiixa mid ka mid ah xiddigaha la filayo in laga fasaxo Camp Nou | Radio Balcad
Home WARARKA CIYAARAHA Manchester City oo Barcelona kala xaajooneysa saxiixa mid ka mid ah xiddigaha...
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qorsheyneysa inay suuqa geyso xagaagan xiddigo dhowr ah si ay boos ugu banneyso saxiiyada ay dooneyso inay lasoo wareegto suuqa aaddan.
Sidaas darteed, Manchester City ayaa xiiseyneysa saxiixa Sergi Roberto oo ka mid ah xiddigaha sida ugu badan loola xiriirinayo in laga fasaxo Camp Nou, waxaana wararka ka imaanaya dalka Spain ay sheegayaan in Pep Guardiola uu si shaqsi ah u daneynayo laacibkan.
Man City, Barcelona iyo wakiillada laacibka Isbaanishka ah ayaa dhammaantood doonaya inay ka wada hadlaan qaabka uu xiddigan ugu dhaqaaqi karo Premier League, maadaama uu lumiyay muhiimaddii uu ka lahaa naadiga Blaugrana.
Si kastaba ha ahaatee, Barca ayaa ka caga jiideysa inay 29-sano jirkan heshiiska u kordhiso iyadoo haatan qandaraaskiisa uu dhici doono bisha June ee sanadka dambe, sidaas darteedna waxa uu bilaash kaga tagi doonaa Catalonia haddii uu dhammeysto sanadka u harsan maadaama dookhiisa koowaad uu yahay sii joogista Barcelona.
Previous articleXukuumadda oo Shaacisay Liiska Xubnaha Cabashada Laga Keenay ee Guddiga Doorashada
Next articleBarcelona oo dhammeystirtay saxiixa Eric Garcia… (Waqtiga lasoo bandhigayo, xilliga uu safka kusoo biirayo & faah-faahinta heshiiska oo dhammeystiran)
Horyaalka Laliga ee Dalka Spain oo Xalay bilowday
Isbitaalada ku yaal ‘São Paulo’ ee Brazil oo qarka u saran...